Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka oo booqday dhul ay Israel xoog ku haysato – Calanka.com
in Dibedda — by admin —	November 19, 2020
TEL AVIV, ISRAEL – APRIL 29: (ISRAEL OUT) In this GPO handout, US Secretary of State Mike Pompeo (R) meets Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu April 29, 2018 in Tel Aviv, Israel. (Photo by Haim Zach / GPO via Getty Images)
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka, Mike Pompeo ayaa Khamiista maanta ah noqday diblamaasigi ugu horreeyay ee Mareykan ah oo booqda dhulka ay Israel heysat ee Daanta Galbeed.
Pompeo ayaa tagay xaafado ay Israel ka sameysay deegaameyn oo ay hadda ku noolyihiin qoysas Israa’iiliyiin ah. Sidoo kale waxa uu booqan doonaa Buuraleyda Golan Heights, oo ah dhul istaraatiiji ah oo ay Israel ka qabsatay Suuriya, sannadki 1967-kii.
Madaxweyne Trump ayaa Golan Heights sannadki hore u aqoonsaday dhul ay Israel leedahay, taasoo ay cambaareeyeen bulshada caalamka.
Heysashada Israel ee Daanta Galbeed, ayay Falastiiniyiinta iyo bulshada caalamka u arkaan xadgudub lagu xadgudbay Qaanuunka Caalamiga ah, sidoo kale waxaa loo arkaa caqabada ugu weyn ee ku hor-gudban nabad ka laga dhex-dhaliyo Israil iyo Falastiin.